Vozon'akanjo mamirapiratra ho an'ny alika: modely tsara indrindra ho an'ny biby fiompinao | Tontolo alika
Alao an-tsaina hoe mandeha mitsangatsangana miaraka amin'ny alikanao amin'ny alina ianao. Avelanao handeha ao amin'ny valan-javaboary izy ary mipetraka ianao hiala sasatra, na manao fanatanjahan-tena ianao rehefa fantatrao fa eo akaikinao ny alikanao. Nefa, tampoka teo dia nanjavona ny alikanao ary, na firy na firy ny fiantsoanao azy dia tsy miverina izy. Ny olana dia tsy hitanao koa izy satria maizina be. Azonao an-tsaina ve izay tsapanao? Alao an-tsaina ange izany seho izany fa a voanjo mamirapiratra ho an'ny alika.
Indraindray ilaina ny alika manao kojakoja manampy anao hahafantatra foana hoe aiza izy io, na hitan'ny bisikileta, fiara ary fiara hafa mba hisorohana loza. Fa inona no tokony ho fantatrao momba ny hazavan'ny alika? Eto ambany isika dia mandinika azy ireo.
1 Karazana voanjo mamirapiratra ho an'ny alika
1.3 Azo asitrika
2 Rahoviana no mividy vozon'akanjo mamirapiratra ho an'ny alika
3 Azo antoka ve ny vozon'akanjo alika manjelatra?
4 Fomba fanamboarana vozona mamirapiratra ho an'ny alika
5 Aiza no hividianana kola alika misy hazavana
Karazana voanjo mamirapiratra ho an'ny alika
Rojo mamirapiratra 2 fonosana...
Elinala Collar Luminoso...
MASBRILL rojo mamirapiratra ...
Eny an-tsena dia afaka mahita karazana voanjo mamiratra maro ho an'ny alika ianao. Ny iray amin'ireo fanasokajiana, sy ny rojo amidy indrindra dia ireto manaraka ireto.
Docatgo Dog Collar...
Io no fototra lehibe indrindra amin'ny rehetra, fa tsy noho izany antony tsy dia misy kalitao izany. Rojo tsotra io, izay manitsy ny vozon'ny biby nefa tsy manenjana (sady tsy malalaka). Amin'ity fomba ity dia hanazava azy ianao ary ho fantatrao hoe aiza izy io amin'ny fotoana rehetra ahitanao ny mazava.
Ny vozon'akanjo manjelanjelatra azo havaozina ho an'ny alika dia midika fa manana batterie ao anatiny izy, rehefa afaka kelikely, dia mila averina simba indray. Manana tombony izy ireo maharitra kokoa izy ireo, satria lehibe kokoa ny tsingerin'ny fiampangana an'ireto batery ireto.
SONNIG LED rojo ...
Manana alika tia rano ve ianao? Avy eo dia mila misafidy an'ity karazana vozon'akanjo maivana ho an'ny alika ity ianao. Tsy afaka milaza aminao izahay fa hamirapiratra amin'ny halaliny lalina izany, saingy tsy hanana olana amin'ny alàlan'ny alika ianao na hitsambikina ao anaty rano, hitohy hiasa io nefa tsy misy olana.
Rahoviana no mividy vozon'akanjo mamirapiratra ho an'ny alika
Tsy misy taona voafaritra hividianana vozon'akanjo mamiratra ho an'ny alikanao. Raha ny marina, amin'ny alàlan'ny torolàlana ho anao rehefa mandeha mitsangatsangana miaraka aminy ianao, ny tena izy dia azonao atao ny mampiasa azy io manomboka amin'ny fotoana anaovana vaksiny ilay alika kely ary azonao atao ny mamoaka azy hitsangatsangana.
Mazava ho azy, misy hetsika izay anolorana soso-kevitra bebe kokoa, indrindra raha mandeha mihazakazaka amin'ny alikanao ianao, na mitafy azy io na mifatotra, dia mivoaka amin'ny alina ianao (satria fomba fampandrenesana ny hafa izany. ny fisiany), sns.
Azo antoka ve ny vozon'akanjo alika manjelatra?
Amin'izao fotoana izao dia azo inoana fa manontany tena ianao raha toa ka zavatra tsara ny fametrahana vozon'akanjo mamirapiratra amin'ny alika na, ny mifanohitra amin'izany, misy fiantraikany amin'ny fahasalamany izany. Ny marina dia raha ny fitsipika dia tsy tokony hidiran-doza izany. Ny ankamaroan'ny vozon'akanjo maivana dia misy rojom-pahazavana tariby, ary ireo, na dia manome hazavana aza, ho an'ny alika dia ambany ny haavony (ankoatr'izay tsy ho hitany izany satria tsy mandeha mivantana amin'ny mason'izy ireo ny jiro).
Na izany aza, raha milamina kokoa ianao, dia azonao ampiasaina ity karazana rojo ity rehefa mandeha mitsangatsangana miaraka aminy ianao. Amin'izany fomba izany, ankoatry ny tsy famoahana ny batery dia tsy azonao atao ihany koa ny jiro izay, rehefa miala sasatra ianao, dia mety hanelingelina anao matory.
Fomba fanamboarana vozona mamirapiratra ho an'ny alika
Mety hitranga izany fa, raha tokony mividy vozon'akanjo mamiratra ho an'ny alika, dia ianao irery no maniry ny hanangana azy. Ary eny, ny marina dia afaka manao izany ianao. Ny hany ilainao dia ny manana ny fitaovana rehetra eo am-pelatananao.
Mba hananganana iray dia mila ireto manaraka ireto ianao:
Mpifandray bateria sy batery.
Fanjaitra sy kofehy.
Tsotra ihany ny fizotrany. Eto izahay manome an-tsipiriany anao izay ny dingana tokony harahina:
Tsy maintsy alaminao aloha ny faran'ny kasety tarihina amin'ny lamba. Ity lamba ity dia tokony ho ny halavany ilainao handrakofana ny vozon'ny alika. Ahoana ny fanamboaranao azy? Eny, amin'ny fanjaitra sy kofehy dia tsy maintsy manjaitra azy ianao. Ankehitriny, tokony amboarinao amin'ny faritra maro hafa izy io mba tsy hiala ao amin'ilay lamba. Izany dia azo atao amin'ny alàlan'ny famoronana lavaka kely amin'ny lamba handalovana ny kofehy na, miaraka amin'ny kofehy, mandalo azy imbetsaka toy ny hoe tadinao no ampiasanao azy.
Izao dia efa amboarinao ny kasety tarihina, fotoana izao hanjairana ny velcro isaky ny tendrony mba hahafahanao manidy ny rojo ary mampifatotra azy mba tsy ho afaka.
Raiso ny mpampitohy bateria, ary ny bateria. Alohan'ny handrakofana ny tadiny tariby amin'ny velcro dia mila ampifandraisinao amin'ny mpampifandray izany mba hiasa. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy hiditra amin'ireo tariby ianao (tsirairay amin'ny toerany) ary apetaho mba tsy hivaha. Mazava ho azy, alao antoka alohan'ny hanaovana izany, ny tariby, apetraka amin'ny fomba handefasanao azy ireo, ahodio ny tsipika tarihiny (manana ny polarity marina izy ireo). Ho fanampin'ny fametahana azy dia mamporisika anao izahay hanampy silikola kely.
Mila manarona ny tadiny amin'ny velcro fotsiny ianao.
Saika vonona hampiasa ilay rojo. Ny sisa tavela dia ny manjaitra ny elastika elastika ary mampiditra ny bateria eo. Tokony hatao tsara fa tsy malalaka loatra mba hahafahan'ny bateria mitazona tsara.
Ary dia izay! Mora ny manao azy na dia toa sarotra kokoa aza izany.
Aiza no hividianana kola alika misy hazavana
Izao efa hitanao izao ny fampahalalana rehetra momba ny vozon'akanjo maivana ho an'ny alika, Ara-dalàna ny fanirianao hahafantatra hoe aiza no ahazoanao azy, marina? Hanome safidy maromaro hisafidianana izahay.
Amazon: Io no safidy voalohany atolotray, ary ataonay izy io satria io no ahitanao karazana maro kokoa. Hanana maodely, habe, loko samihafa ianao ...
kiwiko: Kiwoko dia fivarotana kojakoja biby ary, toy izany, ny fividianana vozon'akanjo miaraka amin'ny hazavana ho an'ny alika dia safidy hafa anananao ao amin'ny magazay. Na izany aza, tsy manana modely firy izy ireo, vitsivitsy ihany. Saingy avy amin'ny maodely fantany fa mivarotra bebe kokoa izy ireo.
Matetika: Amin'ity tranga ity, toy ilay teo aloha, miresaka momba ny fivarotana iray manokana momba ny biby fiompy ihany koa izahay. Momba ny vozon'akanjo miaraka amin'ny hazavana ho an'ny alika manana modely maromaro, tsy dia betsaka, fa ny sasany kosa manerantany ho an'ny alika rehetra.
Aliexpress: Safidy hafa raha tsy mampaninona anao ny miandry ela kokoa ary tsy manana izany ao anatin'ny 1-2 andro dia Aliexpress. Amin'ity tranga ity dia afaka mahita karazana isan-karazany ianao, sahala amin'ny Amazon. Ny maharatsy azy fotsiny dia elaela vao tonga ianao.
Efa nanandrana kola alika misy hazavana ve ianao? Inona no hevitrao momba ny zavatra niainana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Kely alika manjelanjelatra